Yiyiphi i-Samsung Galaxy S20 yokuthenga. Sithelekisa iimodeli ezintathu | Iindaba zeGajethi
Ngokwenyani yokuqeshwa kwayo rhoqo ngonyaka ngoFebruwari, inkampani yaseKorea iSamsung yazisa ngokusesikweni ukuzibophelela kwayo kwisiphelo esiphakamileyo soluhlu lweGPS S20, uluhlu oluvela kwisiphelo seetheminali ezintathu: iGlobal S20, iGPS S20 Pro kunye neGPS S20 Ultra . Kwamsitho mnye, kuye kwavezwa ukubheja kwesibini kwimarike enokusonga ye-smartphone kunye IGlass Z Flip.
Ngokufika kwe-S20, kwaye ngokungafaniyo kwiminyaka edlulileyo, inkampani yaseKorea ilinciphisile ixabiso lesizukulwana esidlulileyo, isizukulwana esiya kuhlala kwintengiso ubuncinci kwiinyanga zokuqala, silandela iqhinga elifanayo neApple kule minyaka idlulileyo. Ukuba unomdla wokuhlaziya isixhobo sakho sakudala kuluhlu lweGPS S20 entsha, siya kukubonisa enye uthelekiso oluya kukunceda ukhethe imodeli efanelekileyo ibhajethi yakho kunye neemfuno zakho.
1 Ukuthelekisa itafile
4 Inkqubo, imemori kunye nokugcinwa
6 Amaxabiso e-Galaxy S20 kunye nokufumaneka kwayo
Uyilo lwangoku lwee-smartphones eziphezulu inegumbi elincinci lokuphucula, umda okwenzekayo ukubandakanya iikhamera ezingezantsi kwescreen njengotshintsho loyilo olunokuthi luqwalaselwe njengenoveli kwaye ngaphandle kwendlela yesiqhelo kwihlabathi leefoni. Esi sizukulwana sitsha sigcina uyilo lwangaphandle olufanayo numahluko kuphela kwindawo yekhamera yangaphambili, ngoku ekumgangatho ophezulu ongumbindi.
Isikrini soluhlu lweGPS S20 yoluhlobo I-infinity-O yohlobo lweDynamic AMOLED ngesisombululo se-3.200 x 1.440 p. Olunye uhlobo olutsha esinikwa yile modeli siscreen, isikrini esinenqanaba lokuhlaziya le-120 Hz kwaye iyahambelana ne-HDR10 +. Ezi mpawu ziyafumaneka kwiimodeli ezintathu eziyinxalenye yolu luhlu: Galaxy S20 (6,2 intshi), Galaxy S20 Pro (6,7 intshi) kunye neGPS S20 Ultra (6,9 intshi).
Inkqubo, imemori kunye nokugcinwa
Njengakwiminyaka edlulileyo, inkampani yaseKorea i-Samsung igqibe kwelokuba isungule iinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwindawo yesiphelo. Kwimalike yaseMelika neyaseTshayina, i-Galaxy S20 ilawulwa yi Snapdragon 865, iprosesa eyi-8-core (2 kwi-2,84 GHz, 2 kwi-2,42 GHz kunye nezine kwi-1,8 GHz). Inguqulelo yaseYurophu ilawulwa yiprosesa ye-Samsung Exynos 990, iprosesa eyi-8-core (ezimbini kwi-2,73 GHz, ezimbini kwi-2,6 GHz kunye ne-Cortex ezine kwi-2 GHz).
Imemori ye-RAM esiya kuyifumana kuluhlu olutsha lwe-S20 iyahluka ngokuxhomekeka kwimodeli. Ngelixa zombini i-Galaxy S20 kunye neGPS S20 Pro zilawulwa yi-8 GB ye-RAM inguqulelo ye-4G, inguqulelo ye-5G ihamba ne-12 GB. Imodeli yokuphela okuphezulu, i-Galaxy S20 Ultra, ifikelela kwi-16 GB yememori kwinguqulelo ekukuphela kwayo ekhoyo, i-5G.
Ngokugcina, i-Galaxy S20 ifumaneka kuphela nge 128 GB yokugcina. IGPS S20 Pro ukongeza ekubeni inenguqulo ye-128 GB, ikwafumaneka kwi-512 GB, njengeGPS S20 Ultra. Uhlobo lokugcina yi-UFS 3.0 kwaye kuzo zonke iimodeli sinokusebenzisa ikhadi le-MicroSD ukwandisa indawo yokugcina.
Isamsung ibonelele ingqalelo ekhethekileyo kwibhetri kolu luhlu lutsha, ibhetri efikelela kwi-4.000 mAh kwi-Galaxy S20, 4.500 mAh kwi-Galaxy S20 Pro kunye ne-5.000 mAh kwi-Galaxy S20 Ultra. Zonke iiterminal ziyahambelana nefayile ye- ukutshaja ngokukhawuleza ngaphandle kwamacingo, ukongeza ekunikezeleni ngenkxaso yokutshaja umva, inkqubo yokutshaja esivumela ukuba sihlawulise iGlobal Buds okanye iGlass Watch esebenzayo ngasemva kwesiphelo.
I-Galaxy S20 Ultra iboniswa njengeyona nto ibalulekileyo yokubheja kwe-Samsung kwihlabathi lokufota. Esi sigxina sinefayile ye- Inzwa ephambili ye-108 mpx, isivamvo esiphambili sikhatshwa yilensi yefowuni enesisombululo sama-48 mpx, ilensi yomnxeba esibonelela ngo-1o wokunyusa ukusondeza okubonakalayo. Ukudibanisa ukusondeza okubonakalayo kunye neArtificial Intelligence, iGPS S20 Ultra iyakwazi ukubonelela nge- yandisa ukuya kwi-100x.
Ukuba sishiya umba weefoto zeGPS S20, enye yeendlela ezintsha ezinikwa yimodeli kukukwazi rekhoda iividiyo kumgangatho we-8k.
Amaxabiso e-Galaxy S20 kunye nokufumaneka kwayo
Inguqulelo ye-4G ene-128 GB yokugcina nganye 909 euro.
Inguqulelo ye-5G ene-128 GB yokugcina nganye 1.009 euro.
Inguqulelo ye-4G ene-128 GB yokugcina nganye 1.009 euro.
Inguqulelo ye-5G ene-128 GB yokugcina nganye 1.109 euro.
Inguqulelo ye-5G ene-512 GB yokugcina nganye 1.259 euro.
Inguqulelo ye-5G ene-128 GB yokugcina nganye 1.359 euro.
Inguqulelo ye-5G ene-512 GB yokugcina nganye 1.559 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Yiyiphi i-Samsung Galaxy S20 yokuthenga. Sithelekisa iimodeli ezintathu